Soomaaliya oo markii ugu horreysay ka qeyb gashay shirka hay’adda duullimaadyada Rayidka Adduunka ee ICAO – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 On Sep 26, 2019
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo duullimaadyada Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Salaad (Oomaar), ayaa Magaalada Ontario ee Dalka Kanada kaga qeyb galay shir weynaha Waddamada xubnaha ka ah hay’adda Qaramada midoobay u qaabbilsan duullimaadyada Rayidka ah ee ICAO.
Wasiirka oo uu ka qeyb galka shirkaasi ku wehliyo Maareeyaha hay’adda duulista Hawada Soomaaliya, Axmed Macallin Xasan, ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay, maaddaama ay Soomaaliya saaxaadda ka maqnayd muddo dheer.
“Soomaaliya runtii waxaa naloo arkayay Waddan yar oo ay ICAO xukunto, wixii saxiix ah ee looga baahda hawada Soomaaliyana hay’addaas ayaa loo mari jira, balse hadda Dowladda ayaa ahmiyadda leh” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiir Oomaar ayaa sheegay in Soomaaliya iyo Waddamada kulmayaba uu shirkani u leeyahay ahmiyad ballaaran, sida isku xirka, is barashada, is caawinaadda , heshiisyada, bixinta tababarrada iyo soo bandhigidda Technolojiyadda cusub ee ku aaddan duulista Rayidka.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan xisaab xir ku aaddan dhowr iyo Labaatankii Sano ee ay hay’addani Hawada Soomaaliya ka maamulaysay Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya.
Shirkan oo ay ka qeyb galayaan 193-da Dal ee xubnaha ka ah ICAO ayaa Saddexdii Sanaba mar ka dhaca xarunta hay’adda duullimaadyada Rayidka ah ee Ontario Canada, wuxuuna noqonayaa kulankii ugu horreeyay ee ay Soomaaliya ka qeyb gasho tan iyo 1991-kii.
Shirka ayaa la filayaa in ay ku biiraan wufuud kale oo ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya Saacadaha soo socda.
Guddoomiyaha golaha shacabka oo shaqadooda u fasaxay Guddiga Maaliyadda.